C/qasim: “TFG-da iyo Shababka ayaa ka Mas’uul ah in ay Dalka soo galaan Kenya iyo Ethiopia” | KEYDMEDIA ONLINE
C/qasim: “TFG-da iyo Shababka ayaa ka Mas’uul ah in ay Dalka soo galaan Kenya iyo Ethiopia”
Moqadisho (Keydmedia) - M/weynihi hore ee Soomaaliya Dr. C/qasim Salad Xasan ayaa ka digay dhibaatooyin dadka Soomaaliyeed kaga imaanaya Ciidamada Kenya iyo Ithiopia.
Ex M/weyne Dr. C/qaasim oo la hadlay saakay warbaahinta ka howlgasho magaalada Muqdisho isaga oo ku sugan Magaalada Qahiro ee Dalka Masar ayaa carabka ku adkeeyey in Dadka Soomaaliyeed aysan raali ka aheyn in dalka ay dib ugu soo laabtaan Ciidamada Itoobiya iyo in mar kale ka dhacaan dagaalo dhiig ku daato.
Waxa uu hoosta ka xariiqay in aysan dalka kusoo kordhin doonin saxilooni balse laga yaabo in ay uga sii darto xaalada hada ka taagan Soomaaliya.
“Ciidamada Kenya iyo Itoobiya in dalka ay soo galaan waa arin fool xun oo aanan loo dulqaadan karin, wax micna oo ay sameyneyso ma jirto dhibaatada ay kusii kordhineysaa umada Soomaaliyeed,” ayuu yiri Dr. C/qasim Salad Xasan.
Dowlada KMG Soomaaliya iyo Xarakada Al Shabab ayuu ku eedeeyey in ay mas,uul ka yihiin in dalka Soomaaliya ay soo galaan Ciidamo ajnabi ah oo ka kala socda labada Dal ee Soomaaliya ood wadaaga la ah oo kala ah Kenya iyo Itoobiya, waxaana uu ugu baaqay Dadka Soomaaliyeed in ay ka Mudaaharaadaan Ciidamadaasi.